Semalt: Kurwisana nekudzivisa Spam Emails
Zvose zvinowanikwa paIndaneti zvinosangana nevanhu vakawanda. Vanhu vakawanda vanoshandisa webhuzuva roga roga rinosangana nema email akawanda anotaura kuti anopa rimwe basa. Spammers inotarisira nzvimbo yepamusoro admin mapeji emawebsite, pamwe nezvakawandamamwe mashoko anobatsira. Munguva yakapfuura, spammers vakatora akawanda password passwords uye ruzivo rwemunhu, uyewo zvimwe zvakasiyanayekuita kuti webhusaiti inoshanda zvakanaka - edu backlinks buy. Vanogonawo kuunza e-commerce pasi, zvichiita kuti kuve nekurasikirwa kukuru kwekutengeserana. Zvose SEOmiedzo inogona kuwira pasi nekuda kwechokwadi chaiyo kupikisa.
Kurega kurega spam kunogona kunge iri pfungwa yakachenjera kunyanya kune webhusaiti itsva. The SeniorMutengesi Kubudirira Muteja we Semalt ,Jack Miller, anorondedzera dzimwe nzira dzokurwisana uye kubva kune spam:
1. Shandisa kero ye email yakachengeteka
Kuchengetedzwa kunoitwa neinternet internet yako kunokosha.Semuenzaniso, vanogona kuita kuti vashandisi vatambure kubudirira kwezvakawanda kana kuwedzera basa re spammers. Zvakakosha kufunga nezvekushandisa kuchengetekachikero chetsamba yemumhepo. Gmail uye Outlook ine dzimwe dzero dze email dzakachengeteka munzvimbo ino nhasi. Dzimwe mamiriro ezvinhu anogona kuvimbisa kuchengetedzwa kwepakombiyuta uchishandisa nzira dzekupedzisira dzekudzivirira spyware.
2. Chengetedza email yako yakachengeteka
Muga wega wega anotanga nekuunganidza mazita akawanda e-email..Izvi ndizvozvinangwa zvavanoshandisa kuparadzirwa kwe spam. Kune nzira dzakasiyana dzeTI dzekubata nekugadzira spam. Iwe unogona kushandisa email yakasiyanaaderesi yezvinyorwa zvakasiyana-siyana zveIndaneti Uyezve, pane nguva dzose chisarudzo chekubatanidza mafaira akawanda pane email yako ikozvino.Ichi chiyero chinogona kuchengeta spam emails mufaira iwe unogona kutarisa nyore nyore, uye usavhiringidze navo ne email inokosha.
3. Shandisa filera dze spam
Kubva kumusoro, zvakakosha kushandisa shanduro yepa email yakachengetedza. Emailvapeji vakaita se Gmail vane filera dze spam dzinogona kubudisa zvimwe zvepamusoro zvakanyanya kuparadzirwa. Mafuta anopisa anocherechedza uye anosundira maimiri ayo arispam kufaira re spam, uko iwe unogona kukwanisa kubudisa kuti ndiani anogona kukushandira.
4. Usatora zvigaro mu spam
Kubva pane pfungwa iyi, zvakajeka kuti spam emails ane dzakawanda URL dzakasiyanamabasa. Izvo zvose mabasa aya anobva kune vanhu vakaita sevanokuvadza, avo vane vavariro dzisina mubvunzo kubva kumashure ekurwiswa kwemashoko emaimeri. The spam emailsine zvisungo zvinoratidza kuti zvingangove zvisingabatsiri mazita. Vanogona kuita chimwe chezvinhu zvinotambisa zvakadai sekutengesa mushanduri weakakuvadzwakune imwe nzvimbo iri kure kurega Linux device.
Kune marudzi mazhinji e spam pamusoro pewebhu. Vakawanda vashandisi veIndaneti vanoona kupararira mukatizuva nezuva mabasa avo. Emails ane spam anobva kuvanhu vane mamwe maitiro akaipa uye anorwara mushure mevanotambudzwa.Spam inotakura zviuru zvemari kubva kuvashandisi vasina internet. Kuramba kubva kune spam kunogona kuchengetedza e-commerce yako kugadzikana pamwe chetekuchengetedzwa kwemunhu wekodha data. Dzimwe dzedzimwe nzira dzokurwisa nadzo uye kudzivisa spam dziri pane iyi nhungamiro. Iwe unokwanisa kukwanisa kudzoraiwe pachako pamwe nekuchengeteka kwewebsite yako kubva kune spam. Iwe unogonawo kukwanisa kuchengeta spam kubva panzvimbo yako kana vatengi.